Mareykanka: Soomaali Lagu Soo Oogay Dacwado La Xiriira Al-Shabaab – Banaadir weyne
WASHINGTON – Dacwad-oogayaasha Dowladda Federaal Mareykanka ayaa Talaadadi shalay si rasmi ah dacwado la xiriira argagixisanimo ugu soo oogay Liibaan Xaaji Maxamed oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, balse heysto dhalashada Mareykanka, kaasoo Mareykanka ka cararay sannadki 2012-ki.
Xafiiska xeer ilaalinta Mareykanka ee magaalada Alexandria ee gobolka Virginia, ayaa sheegay in eedaha kale ee uu Liibaan wajahayo ay tahay isku-dayga inuu rabay inuu shaqaaleysiiyo sarkaal dharcad ah si uu ugu safro Soomaaliya isla markaana uu tababar u soo siiyo dagaalyahannada Al-Shabaab.
Wuxuu Mareykanka ka baxsaday bishii July ee sannadki 2012-ki. Sannadki 2015-ki ayay FBI-da ku dartay liiska argagxisida sida aadka loo doon-doonayo. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Liiban uu ku xiranyahay Soomaaliya, balse Soomaaliya iyo Mareykanka kama dhaxeeya heshiiska gacan-gelinta eedeysanayaasha. – VOA Somali